Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka S/Ogadenia oo Shalay Wacdaro Kadhigay Jigjiga.
Shacabka S/Ogadenia oo Shalay Wacdaro Kadhigay Jigjiga.
Posted by Dulmane	/ December 3, 2018
Madaxda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya JWXO iyo waftigii lasocday ayaa markay kasoo dageen garoonka dayuuradaha ee magaalada Jigjiga waxaa loo dhaqaajiyay dhinaca garoonka kubada cagta ee magaalada Jigjiga oo ay kusugayeen kumanaan shacabka Soomaalida Ogadenia ah.
Dadwaynaha oo aad ubadnaa ayaa halmar iskudaray sacab iyo sawaxan waxaana xumaan gaadhay kantaroolkii kadib markay dadku farxad darteed bilaabeen isku dayeen in ay dhaafaan xayndaabkii loogu tala galay, una dhaqaaqeen dhanka madaxda.
Intaas kadib waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayado qur’aanka kariimka ah kamid ah iyo wacdi diini ah waxaana makarafoonka lagu wareejiyay Ugaas Maxamed Duulane Ugaas Xaashi oo kalmado taariikhi ah munaasabada kufuray.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay madaxda Soomaalida Kenya oo uu horkacayay mudane Senator Maxamed Yuusuf Xaaji, wuxuuna mudanehu sheegay kalmado miisaan culus oo dadwaynuhu ay uriyaaqeen.
Intaas kadib waxaa loo yeedhay Xoghayaha Guud ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya JWXO mudane Cabdiraxmaan Sh Mahdi (Maadey) waxayna dadwaynuhu isku dareen sarajoog iyo waliba sacab aad ubadan, wuxuuna Halgame Maadey madasha kasheegay erayo ayay dadku wada qiiroodeen isagoo sheegay in halgankii dheeraad uusan dhamaanin hadii waxay udagaalamayeen ay waayaana ay garanayaan siday halganka usii wadaan.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay madaxwaynaha Dowlada Deegaanka mudane Mustafe Muxumed wuxuuna mudane Mustafe sheegay hadal qiiro badan isagoo waliba ilintu kaqubanaysay wuxuuna soohadalqaaday shuhadadii JWXO iyo gabdhihii lagu gabood falay wuxuuna jawigu noqday mid murugo markii uu madacwaynuhu khudbada waday.
Intaas kadib waxaa lagu soodhaweeyay Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya JWXO mudane Janaraal Maxamed Cumar Cismaan, waxayna dadwaynuhu isku dayeen in ay halkiisa ugu tagaan balse waxaa xanibay xayndaabkii loodhigay, Gudoomiyaha ayaa khudbad aad umugwayn kusoo xidhay munaasabadii wuxuuna sheegay in halgankii uu wali socdo lana galay marxalad cusub oo dadaal badan ubaahan.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa si nabad iyo farxad ah kusoo dhamaaday munaasabadii balaadhnayd ee lagu Soo dhawaynayay madaxda JWXO.